पाकिस्तानी गायक आतिफ नेपाल आउँदै – Nijgadh Fast Track News, Airport News and Latest News of Nijgadh Bara Parsa Rauthat & Middle Terai Region of Nepal::: Nijgadh.com Nijgadh Samachar Bara First online News
पाकिस्तानी गायक आतिफ नेपाल आउँदै
२०६९, २२ कार्तिक बुधबार ०५:२२ November 7, 2012 Nijgadh.com Comments
‘वह लम्हें, वह बातें कोई ना जाने…,’ ‘तु जाने ना…,’ ‘पहली नजर में…’ जस्ता गीत नसुन्ने नेपाली संगीतपारखी पाउन कठिन छ । उसो भए आतिफ असलामलाई नचिन्नेहरू पनि नेपालमा धेर छैनन् । यी गायकलाई राजधानीका फ्यानहरूले अब प्रत्यक्ष देख्न-सुन्न पाउँदै छन् । पाकिस्तानमा जन्मेका तर भारतीय फिल्म नगरीमा गायन उचाइ लिँदै गरेका आतिफले मंसिर १५ मा काठमाडौंमा कन्सर्ट गर्ने ‘पक्कापक्की’ भएको छ । उनलाई ओडिसी इन्टरटेनमेन्टले ल्याउन लागेको हो । दशरथ रंगशालामा उनले दुई घन्टा गाउनेछन् ।
यी २९ आतिफ पछिल्लो समय बलिउडमा प्लेब्याक सिंगिङमा चर्चित छन् । उनी नेपाली युवा पुस्तामाझ पनि औधि रुचाइएका पाकिस्तानी गायकमा पर्छन् । रक-पप शैलीमा गाउने उनको यो वर्षको लोकपि्रय गीत हो— ‘पिया ओ रे पिया…’ । ‘तेरे नाल लभ हो गया’ फिल्मको यो गीत जस्तै ‘दूरी’, ‘तेरे बिन’, ‘बाखुदा’ लगायत पनि उनका बढी मन पराइएका गीतमा पर्छन् ।
हुन त् यो बन्द भन्दा अगी पनि पाकिस्तानी ब्याण्ड जल २०६३ पौष ३० काठमाडौँमा आयका थिए ।(According to wikipedia) आयोजक ओडिसीका अध्यक्ष सीमान्त गुरुङका अनुसार, पाकिस्तानी ध्वजावाहक ‘पीआईए’ चढ्न नरुचाउने आतिफ पाकिस्तानी सहर लाहोरबाट दुबईतर्फ उडी त्यहाँबाट काठमाडौं ओर्लिनेछन् । नौ जनाको समूहमा आउने आतिफका लागि यस पटक स्वदेशमा उपलब्ध साउन्ड र लाइट सिस्टम नै प्रयोग गरिनेछ । उनलाई सुन्न चाहनेहरूले ५ सय वा १ हजार रुपैयाँ माया मार्नुपर्नेछ ।
आतिफलाई बलिउड निर्देशक महेश भट्टले सात वर्षअघि ‘जहर’ फिल्ममार्फत ब्रेक दिएका थिए । त्यसको ‘वह लम्हें, वह बातें कोई ना जाने…’ गीतले आतिफलाई लोकपि्रयतालाई भारतीय उपमहाद्वीपमा विस्तार गरेको थियो । त्यसयता उनले बलिउडका दर्जनजति फिल्ममा गाइसकेका छन् । हलिउडमा समेत स्वर दिइसकेका उनले आधा दर्जन एल्बम निकालेका छन् ।
उनको वेबपेजमा लेखिए अनुसार, कलेजमा छउन्जेल क्रिकेटरको सपना बुनेका उनले गायनलाई करिअर बनाउनेबारे सायदै सोचेका थिए । गुनगुनाउन रुचाउने उनलाई सहपाठीहरूले कलेजमा हुने कार्यक्रममा गाउन हौस्याउन थालेपछि एकाएक गायन उनको आदत बन्यो । उनले त्यही बेला ‘आदत…’ बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए । त्यो गीत उनले ‘जाल’ ब्यान्डमार्फत निकालेका थिए । सन् २००४ मा उनले ‘जलपरी’ एल्बम निकाले, जसले पाकिस्तानमा तहल्का मच्चायो । त्यो एल्बम युवा पुस्तामाझ सुपरडुपर हिट भयो । दुई वर्षअघि पाकिस्तानी फिल्म ‘बोल’ मा नायकका रूपमा देखिएका आतिफको फेसबुक पेजमा ४० लाखभन्दा बढी फ्यान छन् ।
अधिकांश समय भारतमा रहने आतिफ आउने ‘पक्कापक्की’ भएपछि आयोजक ओडिसीले पनि नेपाली श्रोताहरूसँग उनीबारे अन्तरक्रिया गर्न फेसबुकमा फ्यानपेज बनाएको छ । आतिफ पछिल्लो पटक भारतीय च्यानल कलर्स टीभीबाट प्रसारण हुने गायन प्रतियोगिता ‘सुर क्षेत्र’ मा पनि आबद्ध छन् । भारत र पाकिस्तानका प्रतिभाहरूबीच हुने सांगीतिक ‘युद्ध’ मा उनी पाकिस्तानी सहभागीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी पाकिस्तानी टिमका क्याप्टेन हुन् ।
आतिफलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनी ओडिसीले २०६७ फागुन ७ गते क्यानाडेली रक गायक ब्रायन एडम्स र २०६८ मंसिर ३ गते डेनिस पप ब्यान्ड एमएलटीआरको कन्सर्ट गराएको थियो । ‘आतिफको कन्सर्टको टिकट बिक्री तिहारअघि बैंक र आउटलेट मार्फत सुरु गर्नेछौं,’ ओडिसी अध्यक्ष गुरुङले भने ।
उनको नेपाल आउने फेसबुक पेज बाट थप जानकारी लेऊ न त Click here to like Atif Aslam Live in Kathmandu Nepal
बारा क्षेत्र नं. ६ नेपाली काङ्ग्रेस वारामा संयुक्त कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेता गगन थापा र प्रदिप गिरी
२०७०, २२ कार्तिक शुक्रबार ०६:२५ November 8, 2013 Nijgadh.com
काठमाडौं- निजगढ द्रूतमार्गको डीपीआर बनाउन समझदारी
२०७१, २ चैत्र सोमबार १२:५५ March 16, 2015 Nijgadh.com
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन निजगढ दा्रा सहयोग
२०७०, ७ माघ मंगलवार ०१:५३ January 21, 2014 Nijgadh.com
भारत के हिमेश रेशमियां और पाकिस्तान के आतिफ असलम में कई समानताएं हैं. जैसे कि दोनों ही गायक हैं और साथ ही दोनों फ़िल्मों में अभिनय भी करते हैं लेकिन फिर भी आतिफ हिमेश को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते.
Aupi Date kailae ho ma ta sure janchu tyoo pani VIP ticket ma
hora lala herna janu parlaaaaa